Home Wararka Waxa maxay sababta Fahad Yasin uu Qasnadii NISA gurigiisa u keensaday?
Waxa maxay sababta Fahad Yasin uu Qasnadii NISA gurigiisa u keensaday?
Mudo laga joogo dhowr asbuuc waxa xarunta Hay’adda NISA laga soo qaaday Qasnadii weynayd ee keeydka lacagaha iyo dokumiintiga waxaana la geeyay guri ku dhegan madaxtooyada oo uu degan yahay Fahad Yasin.
Khasnadaan oo ah nooca casriga ee lagu dhajiyo darbiyada, dabkana uusan gubi karin, ayaa waxaa horay loogu soo iibiyay Hay’adda NISA. Hadaba waxaa dad badan isweydiinayaan waa maxay sababta Qasnada loogu soo raray guriga Fahad Yasin? Yaa gacanta ku haya documintigii horay ugu jiray Qasnadaas?
Waxaa muuqata in Fahad Yasin uu si dadban u maamulo hay’adda NISA, isaga oo waxa uu doono ka sameeynato. Fahad ayaa la sheegayaa in ku goodinayo in Qasnadaas uu u adeegsan doono qaybinta lacagaha uu doonayo in uu ku iibsado xildhibaanada.